Ikesi Lokufaka - Weibo Electronic Co., Ltd.
Icala Lokufaka Isicelo - Imboni Yezokuxhumana
I-Weibo Electronic isungule imojuli yokuqapha amandla kagesi enezigaba ezintathu, imitha yamandla wesitimela onamandla amaningi nokuvuza kwenzwa yamanje yokuqapha amandla amandla wokuqapha imishini yamandla egumbi, ukuqapha imishini yomoya, ukuvikela amandla okuxhumana, ukuqapha ibhethri nezinhlelo zokuphatha . Uchungechunge lwezinzwa zokuhlukaniswa kwamandla ezinikezelwe, ezinjengezinzwa zomphumela wehholo, izinzwa zokudlulisa i-AC kanye nezinzwa zokumelana nebhethri zangaphakathi, zenzelwe ukuthembeka okuphezulu, ukucacisa okuphezulu, ukuhlukaniswa okuphezulu, ukuphendulwa kwemvamisa ebanzi nobubanzi obubanzi bokushisa ngokusebenzisa i-EMC ethuthukisiwe kanye nokuvikelwa kombani. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi nezinye izici kuqinisekisa ukusebenza okuthembekile kohlelo lokuxhumana ngocingo.
Isicelo semboni yezokuxhumana
Uhlelo lokuqapha olukude lwendawo yamandla
Uhlelo lokuqapha ukusetshenziswa kwamandla esiteshini sekhompiyutha
Ukutholakala kwamandla kagesi, i-UPS
Uhlelo lokuphathwa kwebhethri
Ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wokonga amanzi waseChina kanye namandla kagesi, ikakhulukazi ukuqaliswa kweNational South-to-North Water Diversion Project, izidingo "zokuqapha okuzenzakalelayo kwabantu abangagadiwe, bambalwa abantu abasemsebenzini" kanye nokuqapha ukuphepha kwezindawo zokugcina amanzi nakho kuyanda.
Ukuqapha kwendabuko kwendabuko kusebenzisa inzwa yengcindezi yomthwalo ukukala ngqo ukudonsa / ingcindezi ukuthola ukuvikelwa okugcwele ngokweqile komthwalo wezimoto. Le ndlela ayinzima ukufaka nokugcina kuphela, kepha okubaluleke kakhulu, ukuthi ingxenye esemqoka yalolu hlobo lwenzwa - ingcindezi Izakhi ezibucayi zithinteka kakhulu ekuphazamisekeni kwemvelo njengokukhukhumala okubangelwa ukushisa kwangaphandle, ukulimala okubangelwa ukudlidlizela, nokuguga ungqimba wokunamathela obangelwa isikhathi eside sokusebenzisa. Ngaphezu kwalokho, ngoba ibanga lamandla alinganiswa ngemishini yohlelo lokusebenza libanzi ngokuthe xaxa, ukunemba kohlobo lokulinganisa lwamandla aphansi kuphansi, futhi kunzima ukuhlangabezana nezidingo zokusebenzisa insimu.
Ikesi Lokusebenza - Isistimu Yokuqapha Ekude ye-Intelligent yeyunithi Yokumpompa Well
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokulawulwa kwezimboni, uhlelo lwe-telemetry yesilawuli kude esingenantambo nalo selusetshenziswe kabanzi emithonjeni kawoyela yasekhaya. Izinzwa eziyinhloko zichazwe kafushane ngezansi:
1. Iyunithi yokumpompa amandla wokuqapha amandla (isigaba sesithathu samandla kagesi nokufakwa kwamanje, ukukhishwa kwe-RS485)
Inzwa ehlakaniphile yenhlanganisela yenzwa eklanyelwe ngqo ukudonsa imithombo ukufaka izisabalalisi ze-analog. Isiginali yokuthola i-AC 3-phase voltage kanye ne-3-phase current; okuqukethwe okukhipha i-3 voltage (inani elisebenzayo), i-3 yamanje (inani elisebenzayo), amandla asebenzayo, amandla asebenzayo, isici samandla, amandla asebenzayo, namandla asebenzayo nedatha yemvamisa. Okukhiphayo kungathola inani elijwayelekile lenombolo yepharamitha kagesi edingekayo kusuka kusixhumi esibonakalayo sokuxhumana, futhi ayidingi ukuthi i-RTU yenze isampuli ye-AC.
Inzwa yokulayisha engu-2.Dedicated (ububanzi: 0 ~ 150kN; ukuzwela kokukhipha: 1mVV)
Ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi isetshenziswa endaweni yokukhiqiza uwoyela, ithuthukiswa njalo; ukuklanywa ngokuphelele nokungenawo amanzi ukuhlangabezana nokusetshenziswa kwesimo sezulu sonke; ama-plugs alungiselelwe ukuthembeka okuthuthukile; ukusebenza okulula nokuphephile; okukhiphayo okungaguquguquki nokushintshana okuphelele.
Inzwa yokucindezela (ububanzi: kusuka ku-0 ~ 10Kpa kuye ku-0 ~ 500Mpa, okukhiphayo: uhlelo olujwayelekile lwezintambo ezimbili)
Lo mkhiqizo usebenzisa ingxenye yokuhlukaniswa egcwele uwoyela engenisiwe noma wonke umzimba wensimbi ongahambisani nengcindezi ohlanganisa inqubo yokuhlanganiswa kombuso oqinile nobuchwepheshe bokuhlukaniswa kwe-diaphragm. I-diffusion silicon chip ifakwa embotsheni eyi-cylindrical egcwele uwoyela we-silicone, ngokusebenzisa i-diaphragm yensimbi engagqwali ne-The casing yangaphandle iyayihlukanisa nendawo yokulinganisa. Umkhiqizo ungasebenza ezindaweni ezinzima.
Inzwa yokufuduswa kwe-Angular (ububanzi: 0 ~ 100, 0 ~ 180, 0 ~ 270, 0 ~ 340 [okuqhubekayo] okukhiphayo 0-5V)
Lo mkhiqizo inzwa yokulinganisa indawo ejikelezayo yento enobudlelwano obuqondile phakathi kokukhishwa kwamandla kagesi ne-shaft rotation angle. Kubonakala ngokunemba okuphezulu, impilo ende, okushelelayo okuhle kokukhipha nokunye.
5.Inzwa yokushisa (okushisa kahle kwekhanda lokushisa lokukhishwa kwe-PT1000)
Kungeniswe iphakethe le-PT1000; ukumelana nokucindezela okungu-static kukhulu kuno-30Mpa; isikhathi sokuphendula izinga lokushisa siyashesha; ukuma kwenzwa kunganqunywa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi; ithempelesha yokusebenza: -50 ° C ~ +400 ° C, ukunemba ibanga A.
Ukulawulwa okubili kwe-infrared (ama-alarm monitors amathathu)
Isisebenzisi esinamawindi amabili esisebenza kahle kakhulu esinobuchwepheshe obuphakeme emkhakheni wezokuphepha wanamuhla siqukethe idivaysi yokutholwa kwe-infrared infrared infrared kanye ne-anti-glare circuit kanye ne-logic digital core.